उच्च शिक्षामा घरबाटै परीक्षा, यसरी पठाइन्छ उत्तरपुस्तिका « Postpati – News For All
उच्च शिक्षामा घरबाटै परीक्षा, यसरी पठाइन्छ उत्तरपुस्तिका
कात्तिक १४, काठमाडौँ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले घरमै परीक्षा (होम इग्जाम)को अनुभव सँगालेका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण विद्यार्थीको परीक्षा भौतिक रूपमा हुन नसक्दा शैक्षिक सत्र नै गुम्ने खतरा बढेपछि विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई घरबाटै परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाएका हुन् । पूर्वाञ्चल तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई घरबाटै परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
नौलो अनुभव गर्‍यौँ
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तरतर्फ आमसञ्चार तथा प्रविधि विषयमा अध्ययनरत दीनानाथ भट्टराई पहिलो पटक अनलाइन विधिबाट लिइएको परीक्षामा सहभागी भए । सँधै भौतिक रूपमा परीक्षा केन्द्रमा उपस्थित भएर परीक्षा दिएको अनुभव सँगाल्नुभएका भट्टराईका लागि घरमै बसेर परीक्षा लिने कुरा सुरुमा त साह्रै नौलो लाग्यो । तर उनले उक्त तहको तेस्रो सेमेस्टरको परीक्षा अनलाइनबाटै पूरा गरे।
परीक्षा नौलो र रमाइलो अनुभूति भए पनि समय व्यवस्थापनका हिसाबले भने चुनौतीपूर्ण रहेको अनुभव उनी सुनाउँछन् । घरमा बसेर परीक्षा दिँदा समय व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको उनी बताउँछन् । “परीक्षा केन्द्रमा नभई घरमै परीक्षा दिए पनि यताउता सल्लाह गर्ने तथा किताब कापी हेर्न लागेको अवस्थामा भने पूरै प्रश्न भ्याउने सम्भावना हुँदैन”, उनी भन्छन् । घरबाटै परीक्षा दिँदा प्रविधिको हिसाबले भने सधैँ समस्या भइरहने अनुभव छ परीक्षार्थीको ।
खासगरी उत्तरपुस्तिका लेखन सकेपछि सम्बद्ध विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पुगे नपुगेको विषयले भने सधैँ तनाव बनाउने गरेको अनुभव विद्यार्थीको छ ।
अनलाइन माध्यमबाटै स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा सहभागी हुनुभएका विपुल पोखरेल घरमा बसेर परीक्षा दिँदा परीक्षाको स्तरीयता कायम नरहला र हेर्ने सार्नेमा जाला कि भन्ने आफ्नो पूर्वानुमानभन्दा फरक तरिकाको परीक्षा भएको बताए । खासगरी मौलिक खालको प्रश्नपत्र सोध्ने शैलीका कारण पनि आफूले सोचेभन्दा राम्रो खालको परीक्षा भएको उनको भनाइ छ । परीक्षा हलमा तीन घण्टा लेख्नेभन्दा फरक शैलीमा घरबाटै परीक्षा दिए पनि यसले सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छ भन्ने आफूलाई लागेको पोखरेलले बताउँछन् । नयाँ अनुभव भएकाले परीक्षाको त्रास भने कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।
यसरी पठाइन्छ उत्तरपुस्तिका
भर्चुअल माध्यमबाट प्रश्नपत्र पाइसकेपछि विद्यार्थीले तीन घण्टामा लेखेर सक्नेबित्तिकै सम्बद्ध विश्वविद्यालयको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । त्यसअघि तीन घण्टामा लेखेको उत्तरपुस्तिकाका पानाका तस्बिर खिचेर या स्क्यानिङ गरेर पठाइन्छ । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका पठाएको एक मिनेटमा विद्यार्थीलाई उत्तरपुस्तिका प्राप्त भएको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. यादव कोइरालाले अहिलेको परिस्थितिअनुसार अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थीसित लिइएको परीक्षा सकारात्मक रहेको बताए । परीक्षा प्रारम्भ भएको दिन विश्वविद्यालयका तर्फबाट सानातिना कमजोरी भएको, दुई तीनवटा कलेजले उत्तरपुस्तिका पठाउन केही समस्या देखिएको भए पनि विस्तारै यसको समाधान भएको उनी बताउँछन् । सङ्क्रमण कायमै रहेको अवस्थामा आगामी दिनमा यस खालको अनलाइन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
अनलाइन माध्यमबाट लिइएको परीक्षाको परीक्षण कुन माध्यमबाट गर्ने भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म निधो हुन सकेको छैन । उत्तरपुस्तिका प्रिन्ट गरेर परीक्षण गराउने या प्रविधिबाटै परीक्षण गराउने भन्नेमा आफूहरू निचोडमा पुग्न नसकेको उपकुलपति कोइरालाले बताए ।
प्रविधिको माध्यमबाट विद्यार्थीले परीक्षाको अवधिमा के काम गरिरहेका छन् भनेर हेर्न सक्ने अवस्था नरहेको र परीक्षाको समय सकिएपछि भने तुरुन्त उत्तरपुस्तिका पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले भने उत्तरपुस्तिका प्रिन्ट गरेर चेक गर्ने र विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका पनि सुरक्षित रूपमा सङ्कलन गर्ने गरिएको बताए ।
लुम्बिनीले सञ्चालन गरेको अनलाइन परीक्षाबाट सकारात्मक सन्देश गएको र आगामी दिनमा पनि यस खालको परीक्षा निरन्तर सञ्चालन हुने जनाएको छ । सुरुमा सबै हच्किए पनि सञ्चालित परीक्षाबाट सकारात्मक सन्देश गएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हृदयरत्न वज्राचार्यले जानकारी दिए ।
अब केही दिनमै स्नातकोत्तर तहको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट लिने गरी आफूहरूले सुसूचित गरिसकेको जानकारी उपकुलपति वज्राचार्यले दिए । स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको परीक्षापछि अब स्नातक तहका विद्यार्थीले पनि अनलाइन परीक्षाकै माग गरेको जनाइएको छ । विद्यार्थीलाई भर्चुअल माध्यमबाट लिइने परीक्षा क्यामरामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने र विद्यार्थीको अनुगमन गर्नसमेत मिल्ने भएकाले परीक्षाको विश्वसनीयता कायम गर्न सकिएको उपकुलपति वज्राचार्यले बताए । गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले खबर लेखेका छन् ।
२०७७ कार्तिक १४,शुक्रबार को दिन प्रकाशित